Maalin: Janaayo 6, 2018
Milkiilaha cusub ee Ceynak
gorgortan kama dambaysta ah ee Turkey Ururka Badaha ee AS Port Tekirdağ curdan gaar lagu qabtay PA ah dhismaha saacadood 05.01.2018 14.30 on Friday. Shirkadda kaqeybqaadata 5 waxay codsatay ka-shaqeynta gaarka ah ee Port Tekirdağ saddex [More ...]
Diyaarad Kootaraysan oo ka shaqaysa Diyarbakir oo sii socota
Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalaweynta waxay sii wadaysaa inay istaagto hawo qaboojiye meelo kala duwan oo magaalada ah si looga hortago muwaadiniinta inay saameyn ku yeeshaan xaaladaha cimilada xun. Dowlada Hoose ee Magaalada Diyarbakır waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ah inay kordhiso tirada joogsiga ee wadooyinka gaadiidka dadweynaha, [More ...]
Shaqada dayactirka ee cusub ee Galata Bridge
Maaddaama ilaha wax-u-dhimaya ee buundada cabbirkooda lagu beddeli doono Buundada 'New Galata Bridge', Buundada "11.01.2018" ayaa loo xiri doonaa gawaarida iyo dadka lugaynaya Jidka 01: 30-04: 30 saacadood Khamiista. Inta u dhaxaysa taariikhaha kor ku xusan iyo waqtiyada New Galata [More ...]
Ku-Xigeenka Agaasimaha Guud ee Gaadiidka TCDD Mehmet Uras Cayilan
Mehmet Uras, Kaaliyaha Maareeyaha Guud ee TCDD Transport Inc., oo soo afjaray xafiiskiisa guud ee sanadlaha ah ee 42 bishii Janaayo 04. Ku salaamo asxaabtiisii ​​guddiga waxbarashada. Kani waa Tartanka Tartanka TCDD [More ...]
Gaadiidka TCDD wuxuu qiimeynayaa Yoolalka Tababarka 2018
Kulankii guddiga tababarka ugu horreeyay ee TCDD Taşımacılık AŞ waxaa lagu qabtay 05 Janaayo 2018 xarunta dhismaha ee Ankara. Veysel Kurt, Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD, Çetin Altun, Kuxigeenka Maareeyaha Guud [More ...]
Tareeno xawaare sare leh (YHT) oo ku yaal Ankara waxay istaagi doonaan saldhiga Lale halkii ay istaagi lahaayeen Sincan bisha Janaayo 10-15. Sida ku xusan qoraal qoraal ah oo uu soo saaray TCDD Taşımacılık AŞ, joogsiyada YakTs ayaa loo beddelay daraasad Başkentray awgeed. Macnaha guud, rakaabka YHT [More ...]
Tareenka Koronto ee Solar Awooda Kowaad ee Caalamka ayaa La Bilaabay
Tareenka ugu horreeya ee tamarta qorraxda ku shaqeeya ee adduunka ayaa bilaabay safarkiisa xariiqda kiloomitir 3 ee Australia Shirkadda Tareennada ee Byron Bay waxay bilaabeen inay adeegsadaan tareenka ugu horreeya ee si buuxda qoraxda ugu shaqeeya ee Australia dhexdeeda. Aduunka kii ugu horreeyay [More ...]
Wasiirka Arimaha Gudaha Harun Polat
Gaadiidka, Wasiirka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, ayaa si xun u dhaawacay korantada hadda jirta Harun Polata, Isbitaalka Waxbarshada Gulhane iyo Cilmi baarista, halkaas oo lagu dabiibayo. Arslan, Polat iyo qoyskiisa ayaa "caafimaad qaba" rajooyin [More ...]
PTT waxay bixisaa adeeg 'Motif Card'
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in safari cusub lagu soo kordhiyay adeegga ay bixiso PTT iyo in “Motif Card” loo adeegsan doono iyadoo lala kaashanayo Memur-Sen iyo Mehmet Akif İnan Foundation. [More ...]
Madaarka cusub ee Istanbul ayaa ku martiqaadi doona ugu yaraan SOMX million oo rakaab ah sannadkii ugu horreeyay
Wasiir Arslan, ayaa ugu dambayntii gaashaanka u daruuray safarka dayuuradda isagoo hadal jeedinaya. Arslan, Turkey waa ganacsiga ugu muhiimsan ee dunida ee ay xaqiiqsadeen maalgashi ugu weyneyd ee taariikhda sannadihii la soo dhaafay Republic 15 si ay u sameeyaan xarun ku yidhi. [More ...]
Maanta taariikhda: 6 January 1900 Qunsuliyada Ruushka ...
Maanta taariikhda 6 January 1900 Ruushka 1. Maximow ayaa u sheegay Tevfik Pasha, Wasiirka Arrimaha Dibadda, in Ruushka, sida Jarmalka, ay dalbadeen heshiisyo ka yimid Anatolia.